Tifaftiraha aysan aqoonin Suxufiyiinta wararka u diyaariya
Thursday February 28, 2019 - 12:07:55 in Wararka by Mogadishu Times
Waa Tififaf tiraha bog caan ka ah facebook-ga waxaana uu ku qoraa wararka ku saabsan dalkiisa oo ah mid ka mid ah waddamada ugu liita caalamkan ee dhankaa xorriyatul qowlka warbaahinta. Hase ahatee xitaa wariyaasha wax ku qora boggiisa aqoon buuxda u
Waa Tififaf tiraha bog caan ka ah facebook-ga waxaana uu ku qoraa wararka ku saabsan dalkiisa oo ah mid ka mid ah waddamada ugu liita caalamkan ee dhankaa xorriyatul qowlka warbaahinta. Hase ahatee xitaa wariyaasha wax ku qora boggiisa aqoon buuxda uma laha qofka uu yahay. Marka si guud loo eego, ninkan oo magaciisa sabab jirta awgeed loogu soo koobayo J, noloshiisu waa mid la mid ah dadka caadiga ah. J Waxaa uu leeyahay qoys, shaqo maalinle ah, wuxuuna taageeraa koox ciyaarta kubadda cagta.
Lahaanshaha sawirkaBBC NEWS Image captionMa jirto cid garaneysa ninkan tifaftiraha ka ah bog caan ka ah Facebook-ga
Suuragal ma tahay in Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ay hal madaxweyne yeeshaan?
Xiriirka Jabuuti iyo Eritrea oo weji cusub yeeshay
Kaalinta Soomaaliya ee xurgufta Eritrea iyo IGAD
Balse J wuxuu sidoo kale yahay tifaftiraha cajiibka ah ee bogga ugu weyn bogagga Facebook-ga ee laga laga soo tabiyo wararka ku saabsan dalkiisa Eretariya.
Ma jiro Qof garanaya
Sida laga soo xigtay hay'adda wariyaasha aan xuduuda laheyn, kaliya dalka Kuuriyada waqooyi ayaa Eretariya uga liita dhinaca madaxbanaanida warbahainta.
Ururka caalamiga ah ee The international media monitoring organisation, ayaa dalka Eritrea ku tilmaamay dal uu ka jiro xukun kali talisnimo ah isla markaana aanay warbahaintu wax xuquuq ah ku laheyn.
Dhamaan warbaahinta ka howlgasha waddankan ku yaalla waqooyiga bari ee qaaradda Afrika waa kuwo ku hadla afka dowladda, wariyaashana xabsi ayaala dhigaa iyaga oo aan wax maxakamad ah la geynin ama dacwad lagu soo oogin.
Taas ayaa J boggiisa lagu magacaabo Eritrean Press ka dhigaysa mid qeyrul caadi ah ama laga yaabo in noociisa uusan jirin.
Waxaa boggan ku taxan dad kor u dhaafaya 250,000 oo ruux, wuxuuna ka madax bannaan yahay dowladda Eretariya.
J waxa uu ku noolyahay dalka Ingiriiska balse waxaa uu safarro guryo noqosho ah ku tagaa dalkiisa, wuxuuna oggolaaday in uu waraysigii ugu horeyay siiyo BBC-da, isagoo nagu xiray shuruud ah inaan qarinno aqoonsigiisa.
Xitaa sideed qof oo bartiisa si iskaa wax u qabso ah wax ugu qora isla markaana kala jooga dalalka Eritrea, Ingiriiska iyo Maryakanka ayaan magaciisa saxda ah aqoonin.
"Ma jiro qof garanaya ruuxa aan ahay, haddii ay taasi dhici lahayd xilligan waxaan ku jiri lahaa xabsi", ayuu yidhi.
Waxyaabaha boggan facebook-ga lagu daabaco ayaa isugu jira arrimo ku saabsan dhammaan nolosha dadka Eratariya.
Marka laga soo tabo wararka siyaasadda iyo dhacdooyinya, waxaa kale oo lagu daabacaa warar ku saabsan arrimaha bulshada, sheekooyinka uu binu'aadamka xiiseeyo iyo waxyaabaha qadiimiga ah ee Caasimadda Asmara.
Celcelis ahaan macluumaadka lagu qoro boggan waxay gaaraan 1.25 milyan oo qof todobaad kasta.
Inta badan aqristayaasha dhabta ah ee warbaahinta Eretariya waxaa qayb ka ah qurba joogta ku kala nool caalamka .
Inkastoo tirada dadweynaha dalka Eretariya ay tahay shan milyan, hadana J ayaa ku qiyaasay in 30,000 oo ka mid ah aqristayaashiisa ay ku suganyihiin gudaha dalkiisa.
Dhibaatadu kama taagna tirada dadka. Lama mid aha dalalka Kuuriyada Waqooyi- Shiin aha ama Iiraan oo isticmaalka baraha bulshada ay sharci darro ka tahay.
Balse dhibaatadu waxay ka taagan tahay sida ay dadka awood ugu leeyihiin iney Internet helaan.
Qiyaastii in ka badan 1% ka mid ah bulshada dalka Eretariya awood uma helaan isticmaalka Internet-ka, sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGES Image captionTiro yar oo ka mid ah shacabka Eretariya ayaa isticmaala Internet-ka
Laakiin J ayaa kalsooni ku qaba in wasiirada dolwadda Eritrea ay ka mid yihiin aqristayaashiisa.
Dolwadda Eritrea waa dolwadda hal dhinac ah oo aan mucaardka u dulqaadanin, waxaana madaxweyne Isaias Afwerki uu talada dalka qabtay 1993 markii ay ka go'een dalka itoobiya .
Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dolwadda ku eedayay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
'Dagaalka Dacaayadda '
J ayaa sheegay in uu bartiisa, oo uu sameyay sanadkii 2014-kii, uu ku dhiirri galiyay muwaadiniinta dalkiisa isaga oo billaabay fikrado ka caawinaya dadka dalkiisa in ay la dagaalamaan waxa uu ugu yeeray dacaayada dagaalka.
Wuxuu intaas ku daray in dowladda Eritrea ay aad ugu liidato dhanka la dhaqanka warbaahinta ayna u aragto dad dhib ku ah dalka.
BBC-da uma suur galin in ay xaqiijiso sheegashooyinka eedamahaan iyadoo xirir la sameysay mas'uuliyiinta dowladda balse aanay ka jawaabin.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGES Image captionXiriirka Itoobiya iyo Eretariya ayaa dib usoo noolaaday
Xiriirka wanaagsanaaday ee Itoobiya iyo Eretariya ayaa dad badan oo u dhashay Eretariya rajo galiyay waxaana mas'uuliyiinta dolwadda oo wax laga wayadiyay heerka xorriyatul qowlka ay sheegeen in dadku ay ra'yigooda dhiiban karaan.
J ayaa sheegay in uu sii wadayo qoraallada iyo ka hadlidda arimaha dalkiisa